Phandeeyar Contact Form 2019-2020
သင့် Startup နာမည်က ဘာလဲ။ What's the name of your startup? *
ဆက်သွယ်ရမည့်သူ၏ အမည် - Contact Person Name *
အီးမေးလ်လိပ်စာ - Contact Email Address *
ဖုန်းနံပါတ် - Contact Phone Number *
အဖွဲ့ဝင်များ - Team
တည်ထောင်သူတွေဟာ Startup ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် သင်နဲ့ သင့်အဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပေးပါ။
Founding Team is the most important part ofastartup. We want to get to know you! Tell us more about you and your team.
တည်ထောင်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ သူတို့ရဲ့ တာဝန်၊ နောက်ခံအကြောင်းအရာအတိုချုံးနဲ့ Linkedin profile လေးရှိရင် ဖော်ပြပါ။ - Who are the founders? Please list their role, brief background and LinkedIn profile. *
ဥပမာ - ကံလင်းသူရိန် (CEO)၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကိုသင်ကြားခဲ့ပြီး အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာ ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ စသဖြင့်... For example: Kan Linn Thurein, (CEO): studied engineering at Yangon university and has been an engineer for3years; Thet Sandar Thawka (CTO): studied IT at Yangon university and worked as an consultant for2years; Phyu Khaing: (Marketing): just finished her marketing BA at Singapore University
တည်ထောင်သူတွေမပါဝင်ဘဲ သင့်အဖွဲ့မှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ထင်လဲ။ How many people are on your team? (Not including founding team members) *
လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး တည်ထောင်သူတွေမှာရှိတဲ့ သင့်တော်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖော်ပြပါ။ What kind of relevant experiences do the founders have with the industry your business is in? *
သင်ကဘာတွေ အောင်မြင်ခဲ့လဲ။ သင်က ဘာကြောင့်သူများထက် ထူးခြားတာလဲ။ ဥပမာ - ဒီဂျစ်တယ် မားကတ်တင်းကုမ္ပဏီတွင် လုပ်သက် ၅ နှစ် - What makes you special and what have you accomplished? E.g.5years inatelecommunications company
ပရိုဂရမ်တစ်ခုလုံးကို တည်ထောင်သူအားလုံး ကိုယ်တိုင်လာပြီး တက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ Can all the founders attend the full program in person? *
ရွေးချယ်ခံရရင် သင်နဲ့ သင့်ရဲ့အဓိက အဖွဲ့ဝင်တွေက အခြားအလုပ်တာဝန်တွေမရှိဘဲ သင့် Startup မှာအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။ If you get accepted, will you and your core team work full time on this startup without any other external work obligations? *
Please answer Yes or No. If No then, please explain the reasons below.
This form was created inside of Phandeeyar. Report Abuse